सायद त्यो क्षणले उनीहरुलाई खेल जीवन भर पोलिरहेछ ! | Hamro Khelkud
सायद त्यो क्षणले उनीहरुलाई खेल जीवन भर पोलिरहेछ !
‘त्यो १०/१२ घण्टा मेरो लागि सपना जस्तो भएको छ । अझै विश्वास गर्न सकिरहेको छैन । टिम उता छ हामी यता छौं । पछुतो मात्र लाग्छ । बितेको समयलाई फर्काउन त सक्दिन । तर एउटा प्रतिबद्धता आफैसँग गरेको छु, यस्तो घटना अब जीवनमा दोहोरिने छैन ’ राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मिडफिल्डर अञ्जन विष्ट अहिले यसरी विस्मत मान्दैछन् ।
भुटानमा आज नेपाली टोलीले कुवेतको सामना गर्दैछ । बिहिबार घोषणा गरिएको अन्तिम २३ जनाको टोलीमा उनी पनि थिए । तर, अन्जनसहित ४ खेलाडी विदाईमा पुगेर पनि घर फर्कनुपर्ने अवस्था सृजना भयो । कारण अन्जन तथा टोलीका अन्य महत्वपूर्ण सदस्य विमल घर्तीमगर, दीनेश राजवंशी र सन्तोष तामाङ भुटान जानुअघिल्लो रात शुक्रबार अबेर घर फर्केका थिए । त्यो खबर अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) पदाधिकारीका पुग्यो । अघिल्ला घटनाहरुमा छानविनको औपचारिक मात्र देखाउँने एन्फाले यसपटक खेलाडीलाई जोगाउन अनेक तर्क गरेन । विदाईका लागि एन्फा पुगेका खेलाडीलाई घर फर्काउने हिम्मत गर्यो ।
अञ्जन भन्छन्, ‘खेल जति नजिक आइरहेको छ , त्यति पीडा हुने रहेछ । मैले यस्तो महसुस यसअघि कहिल्यै गरेको थिएन । हो हामीबाट गल्ति भएकै हो । अब यसमा यदि तर भनेर हामीले उम्किन पाउँदैनौं । एउटा खेलाडीले खेल्न नपाउँनु जत्ति ठूलो सजाय अरु के होला र ? आफ्नै गल्तिमा धेरै पछुताए । रात भरी रोए । तर, हुने कुरा भइसक्यो । त्यो घटनालाई म बदल्न सक्दिन । त्यसबाट पाठ भने सिकेको छु । ‘
साफ फुटबलको तयारी टोलीसँग होटलमा रहेको अन्जन शुक्रबार दिउँसो होटलबाट निस्केका थिए । ‘त्यहाँबाट केहि समय दरबारमार्ग तिर लगेज हेर्न लागे । चित्त बुझ्दो पाइन । साँझ ६ बजे तिर मनाङ मस्र्याङ्दी क्लब पुगे । क्लबमा दाइहरुसँग नयाँ सिजनका बारेमा अनौपचारिक कुराकानी भयो,’ उनले स्मरण गरे, ‘८ बजे तिर म कोठा पुगे । खाना खाएर लगभग सुत्ने लागेको थिए । तर म ११ बजे राती निस्के । गल्ति त्यहि भयो । दशा बाजा बजाएर आउँदैन भन्छन्, त्यो रात मलाई त्यस्तै भयो । यहि हुनको लागि निस्के होला । हामी २ बजे तिर घर फर्कियौं ।’
‘बिहान एन्फा पुगेपछि हामीलाई एक एक बोलाइयो । मैले केहि ढाटिन । गल्ति भएपछि ढाटेर हुने कुरा पनि थिएन ,’ उनी भन्छन्, एन्फाको निर्णयलाई स्वीकार्नुको हामीसँग विकल्प थिएन । कारण हामी दोषी थियौं । हामीलाई छाड्दा एन्फालाई अनुशासन तोड्ने खेलाडीलाई च्याप्यो भन्ने आरोप लाग्थ्यो । हामीलाई भुटान जानबाट रोक्नुलाई मैले कुनै अन्यथा लिएको छैन । ‘
‘राष्ट्रिय टोलीको सदस्य राती आराम गर्न छाडेर बाहिर निस्केको परिणाम भोग्दैछु । घरबाट एन्फा पुगेर लगेज लिएर भुटान नगइ फेरि घर फर्कनु परेको त्यो समय मेरो लागि सपना जस्तो मात्र लाग्छ । अहिले पनि म आफ्नो त्यो क्षण साच्चै होर भन्नेर सोच्छु । म भुटान नगएर घर फर्केपछि ड्याडी हेटौंडाबाट रातारात काठमाडौं आउनुभयो । म जान्ने भइकन त्यसअघि कहिलै ड्याडीसँग रोएको थिएन । त्यो दिन बेस्सरी रोए । आफ्नै गल्तिमा रोए ,’ भावुक हुँदै अन्जन भन्छन्, ‘मेरो बारेमा घर छिमेक तिर बुझ्दा हुन्छ । म खराब मान्छे होइन । तर मिडियामा जसरी समाचार आइरहेका छन् , त्यसले हामीलाई ठूलै अपराधी हो भन्ने पर्न गएजस्तो लाग्छ । सबै समाचार हेर्छु । भएको कुरा आउँदा त मान्नुपर्छ । नभएको कुरा पनि जोडेर आउँदा पीडा हुने रहेछ । यसपटक त्यहि महसुस गरे ।’
पाँच वर्षदेखि टोलीका नियमित सदस्य रहेका अन्जन र विमल २०७२ यता देशका लागि ४ वटा उपाधि दिलाउने मध्येका हुन् । २०७२ मा भदौं मा नेपालले यू १९ साफ च्याम्पियनसिप जित्दा विमल टोलीको कप्तान र अन्जन त्यसको महत्वपूर्ण सदस्य थिए । त्यसपछि नियमित राष्ट्रिय टोलीका सदस्य रहेका यी दुईसहितको टोलीले त्यहि वर्ष बंगबन्धु गोल्डकप, भारतमा १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को स्वर्ण पदक जितेको थियो । २०७३ को कात्तिकमा राष्ट्रिय टोलीले एएफसी सोलिडारिटी कप जित्दा अन्जन विमल दुवै टोलीका महत्वपूर्ण सदस्य थिए ।
विमल भुटान भ्रमणबाट रोकिएका दीनेश र सन्तोष सबैले आफुहरुबाट गल्ति भएको मानेको अन्जनले सुनाए । ‘हामी फर्केपछि एकअर्कासँग कुराकानी भयो । हामी जोर्डनसँगको खेल होस् वा त्यसपछि म्यानमारसँगको मैत्रीपूर्ण खेल सबैमा प्लेइङ मै थियौं । अब अहिले हामीले टोलीलाई साथ दिन सकेनौं , त्यो पनि आफ्नै गल्तिमा ,’ उनले थपे, ‘सबैलाई त्यहि गल्तिले पोलिरहेको छ । मिल्ने भए त अहिले भुटान गएर खेलौ लाग्छ ।’
भुटानमा आज कुवेतविरुद्ध हुने खेलका लागि टोलीलाई शुभकामना दिदै अन्जनले नेपाली टोली र आफ्ना समर्थकसँग माफी मागेका छन् । ‘मैले गल्ति गरेको हु । यसमा मलाई पछुतो छ । मेरो जीवनमा यस्तो घटना फेरि दोहोरिने छैन । आउने दिनमा फुटबलमा अझै धेरै मेहनत
गर्नेछु ।अझै बढी प्रतिबद्धताका साथ देशका लागि खेल्नेछु । यो गल्तिका लागि सबैसँग क्षमा माग्छु ।’
विश्व कप छनोटका अघिल्ला ४ खेलमा नेपालले एउटा मात्र खेल जितेको थियो । भदौं २४ गते चाइनिज ताइपेविरुद्ध २–० ले हराउँदै अन्जनले नै गोल गरेका थिए । त्यो उनको देशका लागि पहिलो गोल पनि थियो । विश्व कप छनोटमा यसपटक नेपालले अहिले सम्म त्यहि २ गोलमात्र गर्न सकेको छ । तर, उनीसहित चारै खेलाडी आफ्नै कारण टेलिभिजनमा आम दर्शकजस्तै टोलीको खेल हेर्न बाध्य भएका छन् । सायद त्यो क्षणले उनीहरुलाई खेल जीवन भर पोलिरहेछ ।